Ubuntu haichazo tsvaga yako yekuvhura data zvakare | Linux Vakapindwa muropa
Canonical inodzidza kubva Windows 10 mushandisi kusagutsikana kweUbuntu
Canonical yakazvitsauranisa uye kuzvitsauranisa pachayo munyika yeakavhurika sosi software yezvigadzirwa uye zvigadzirwa, pamwe nekuve nekukwanisa kuita Ubuntu sisitimu yekushandisa yakawanda. Vamwe vakaita seFSF vaive vasingafare nekufamba kweUbuntu kwakakanganisa rusununguko kana kuvanzika kwevashandisi, asi ikozvino Canonical yanga ichida kutora nhanho kumashure.
Pakugoverwa kweLinux Ubuntu, kutsvaga kwako pamhepo hakuzotumirwe kuCanonical nekutadza. Sarudzo inotumira iyi mhando yedata ichave yakaremara nekutadza sa Ubuntu 16.04 LTS uye isina kugoneswa nekukanganisa sezvazvinoitika mune dzazvino neshanduro dzekare kubvira pakaunzwa ino sisitimu inokanganisa zvakavanzika zvevashandisi muUbuntu 12.10, ichiva inonyanya kunetsa mashandiro munhoroondo yedistro yekubatsira kweAmazon.
Mark Shuttleworth, bhirionea ari kumashure kweCanonical, akakwanisa tora imwe mari kubva kuAmazon iwe yaunogona kuisa mari mukuvandudza Ubuntu. Izvi pasina mubvunzo zvakanaka kune vashandisi vepuratifomu iyi, asi inotyora kodzero yekuvanzika iyo isinganyanyoremekedzwa nhasi munyika yekomputa neesoftware yese ine zvakavanzika zvinoshanda kungave kubatsira hurumende, vamiriri veusori kana kungo tengesa ruzivo rwako kune vechitatu mapato uye uwane purofiti yezvemari kubva kwazviri.
Iye zvino izvi zvave kuzomira uye mashandiro acho, ayo kusvika parizvino airatidzika kuvhurwa nekutadza uye zvainetsa kuita kuti zviite, haachazovapo. Sarudzo iyi yakaita kuti tsvagurudzo dzese dzakaitwa paInternet dzigovaniswe uye izvi zvinofanirwa kunge zvisiri pamutemo pamwe nekuratidzwa Richard Stallman nemapoka akaita seEFF aive akatsoropodza ine Ubuntu uye Canonical. Zvishoma nezvishoma Canonical yanga ichinatsa sisitimu, ichinyora zvirimo, ichiita kuti isazivikanwe uye kunyange kubvisa kutsvaga kuAmazon, asi izvozvi zvave kutora rimwe danho… kutambirwa.
Icho chikonzero, icho ivo programmers vari kushanda paUnited 8 uye ino interface nyowani inoshandura zvachose kutsvaga uye ichatipa kutonga kuri nani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Canonical inodzidza kubva Windows 10 mushandisi kusagutsikana kweUbuntu
Saka vese maWindows vanovenga vanopedza mazuva avo vachitsoropodza zvakavanzika zveMicrosoft zvavasingafanirwe kuwana muUbuntu nekuti "Ubuntu hausori" ... Vari "zero" here?
Iye zvino izvo zvasara ndezveCanonical kudzidza kubva kusagutsikana kwevashandisi veUbuntu ...
Pindura kuna Er
… Nekuti zvinokanganisa kuvanzika maitiro eM1Çr0 $ $ 0sft akatotongwa neCanonical…
Chinhu chakanaka pane matani emamwe ma distros kusarudza kubva.
Nenzira, senguva dzose, RMS inotaurwa seyakagochwa, asi hazvitaurwe kuti paakamushora (sezvaakashora kuti vakatisora ​​pamasocial network) vakamudaidza kuti anopenga. Nguva DZOSE inoratidza Stallman chaiko.
.. nekuti zvisingaite zvehunhu zveM1Çr0 $ $ 0sft zvakatotongwa neCanonical ...
Iwo akanakisa accounting ekushandisa eLinux